စွန့်စားမှုများ၏ကြီးမားသောအိပ်မက်, ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် insatiable ဝိညာဉျကို - အောင်မြင်ပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Diyana Alcheva နှင့်အတူအင်တာဗျူး
Polina Choparinova ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Sierra တောင်ရိုး, နီဗားဒါးစီးတီး - ယခုနှစ်အစအဦးကတည်းကငါဝိဇ္ဇာအတတ်အားအနည်းငယ်သာမြို့တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလူဦးရေနံပါတ်များကိုတထောင်အများအပြားကလူအများစုအနုပညာသဘောသဘာဝ, အနုပညာရှင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်စိတ်ဝိညာဉ်၏လူဦး။ ဤအရပ်ဌာနကိုရှာဖွေခြင်း, ငါစိတ်ဖိစီးမှု, အတင်းမာနေနေ့စဉ်ဘဝသို့မဟုတ်ငါအတိတ် 10 နှစ်ပေါင်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိန် ဆို. ပူဇော်ခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်ဝိုင်းကိုပြန်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘို့အကစုံလင်သော setting ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။
Diyana Alcheva ©
ဤတွင်အဆိုပါခမ်းနားသဘောသဘာဝအကြား, ငါလိုအပ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါငါ့အလိုရှိသမျှအာရုံနှင့်အတူပျော်စရာများနှင့်ခံစားဘဝရှိခြင်း, ဂီတကိုနားထောင်, ငါ့အသစ်များကိုပါရမီအနုပညာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဖြုန်းအချိန်အများစုမှာ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြှနျုပျကိုဝိညာဉ်ရေးရာချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေ, ငါ့ကျန်းမာရေးကိုခိုင်ခံ့ကူညီပေးခဲ့သည်။ ကျွန်မဝိညာဉ်အားဖြင့်ကြွယ်ဝလေ့ကျင့်ခန်း၏နံပါတ်တစ်ချိန်ခွင်လျှာကျေးဇူးတင်စကားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ သဘာဝကျကျသည်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဝိညာဉျကိုငါ၌အသကျရှငျကြောင့်ငါတစ်ဦးအဖြစ်နာရီပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်သုံးဖြုန်း ဘဝနှင့်စီးပွားရေးနည်းပြ.
ငါပြည်ပမှာလေ့လာဖို့သှားသောမိတျဆှမြေားခဲ့, ဤသည်ငါ့ဆီသို့ဦးတည်းသောအစားထိုးသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ငါအဲဒီမှာအခြေချကူညီဖို့ဆန္ဒရှိသူတစ်ဦးအသိအကျွမ်းခဲ့ဘယ်မှာ Los Angeles မြို့အတွက်လျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မလက်ခံခဲ့သည်ပေမယ့်ကောလိပ်အချိန်၌ငါ့ကိုစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ဖို့ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ငါဗီဇာငြင်းဆန်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရခဲ့သည်။
တိုက်ဆိုင်ငါ madly နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျသူသည်ငါ့ကိုကျောင်းသားတစ်ဦးဗီဇာနှင့်အတူလက်ပံကိုသွားကူညီပေးခဲ့သည်တော်မူသောအင်တာနက်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအမေရိကန်ကောင်လေး, တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါတစ်နှစ်လက်ပံကွန်မြူနတီကောလိပ်မှာလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ကျနော်တို့လက်ထပ်တယ်။
ကျွန်မသူငယ်ခဲ့ကတည်းကငါလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရပြီဟုပြောလိမ့်မယ်။ ငါ၏အကလေးဘဝအတွက်ငါသည်သူတို့မစီးပွားဖြစ်အသွင်ခဲ့ငါ့ကိုအကြောင်းကိုပြောကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတဆယ်တုန်းကကျွန်မကျောင်းကိုလည်ဆွဲယူဆောင်သူတို့ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ သူတို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိခဲ့မူသောငါ့မိခင်များ၏ကုန်ပစ္စည်းများကနေအဝတ်အပေါ်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်ငါသည်လည်းအိမ်မှာငါ့အအတန်းဖော်ယူခဲ့ပါတယ်။
ငါမရေိကရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အခါကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏န်ထမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါငါသည်အလျင်အမြန်စီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရရန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အများအပြားအမှုအရာလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခဲ့သည်။
2007 ငါတို့သည်အွန်လိုင်းမှ start-up ကုမ္ပဏီဖန်တီးခဲ့သည်။ ကနဦးန်ဆောင်မှုတို့တွင်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းပေးခြင်း site ကို "ဖောက်ပြန်သောသူငယ်တက္ကသိုလ်" နှင့်အများကြီးပိုမိုသိရှိလိုပါက "ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Professional က" အဖြစ်ဘဝနည်းပြ "နည်းပြသိမှတ်ခံစားမှု" များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်တခု access ကိုအတူ paid အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် option ကိုဖြစ်ကြသည်။
နှစ်နှစ်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူထက်ပို6သန်းဒေါ်လာထုတ်လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ဧပြီလ 2008 အတွက်ဖွင့်လှစ်သောနေ့တွင်, 48 နာရီထက်လျော့နည်းဘို့ကျနော်တို့အဖွဲ့ဝင်နှင့်ငါတို့အပိုဆောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များအွန်လိုင်းအရောင်း 1.1 သန်းဒေါ်လာ generated ။ ဗွီဒီယိုနှင့်အနာဂတ်အကယ်ဒမီနှင့်အတူလူမှုမီဒီယာ Buzz - နောက်တစ်နေ့နှစ်အနည်းငယ်ငါကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူနှစ်ခုသည်အခြား start-up ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငါ, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး On-line ကိုနည်းပြဖွံ့ဖြိုးဆဲလေ့ကျင့်ရေးနှင့်စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မလူမှုမီဒီယာ၏လယ်ပြင်တွင်အများအပြားလေ့ကျင့်ရေးထုတ်ကုန် created: ဘယ်လိုအောင်မြင်စွာ Instagram ကိုသုံးစွဲဖို့လူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ရည်ရွယ်သော Facebook ကို Mastery ကလပ်က, Twitter Mastery ကလပ်နှင့် Instabrand ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်တစ်ခါတလေ 1,000 ကျော်ကလူတက်ရောက်ခဲ့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးဆုံးညီလာခံ၏တဦးတည်းမှာ on-line ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လယ်ပြင်တွင်စင်ပေါ်မှာစကားပြောဆိုရန်အခွင့်ထူး, လူမှုရေးမီဒီယာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါပြီ။
ငါတအပြုသဘော, စိတ်အားထက်သန်မှု, ရည်ရွယ်ချက်၏အဓိပ္ပာယ်ဝင်စားရမည်အသက်တာ၌အောင်မြင်ဖို့, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာသောထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းကြောင့်လူတိုင်း, တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှုထောင့်များတွင်လိုလားအရာကိုသိနှင့်အောင်မြင်မှု၏တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသင့်ပါတယ်။ ငါ့အဘို့အောင်မြင်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့လိုက်နာရန်နှင့်ကြှနျုပျကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု. ပြည့်စုံခံစားရစေသည်လယ်၌အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း။
ထိထိရောက်ရောက်ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုကျော်လွှားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့်မှတဆင့်ထိုကဲ့သို့လျော်သောအသက်ရှူကျန်းမာအိပ်စက်ခြင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု, ကောင်းသောအစာအာဟာရများနှင့်ပုံမှန်တရားအားထုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအမှုအရာ, စျြလြူမရှုသင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြဲမြံစေခြင်းငှါ, သငျသညျ, မှန်ကန်သောတိကျမှုနှင့်သင့်ကတိကဝတ်ဖြည့်ဆည်းဖြစ်ခြင်း, ဆိုလိုတာကတဲ့ professional နဲ့တူပြုမူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "no" ဆိုတဲ့ပြောနှင့်သင်ဖြည့်ဆည်းဖို့စွမ်းရည်ကင်းမဲ့သောအရာမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မကျူးလွန်ရန်အခါကိုသိရန်အရေးကြီးပေသည်။
ဒါကအနည်းငယ်စာကြောင်းများအတွက်ဖြေကြားမရနိုငျသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်ကျိန်းသေအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာဆွဲဆောင်မှုစျေးကွက်၏နည်းလမ်းကိုအောက်ပါအကြံပြုလိမ့်မယ်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဆွဲဆောင်မှုစျေးကွက်၏စိတ်ကူးစားသုံးသူမှပုံမှန် update များနှင့်အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဘလော့ဂ်, podcasts, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Socia မီဒီယာဆိုဒ်များ: ငါတဦးတည်းဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးကို up-to-date ဖြစ်အောင်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်အကြံပေးလိမ့်မယ်။
© Instagram ကို - Diyana Alcheva
သင် USA တွင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်အရာကိုသင်ယူကြသနည်း
ဒါဟာသူ့ရဲ့သက်သာချောင်ချိရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်, ဖြစ်နိုင်သမျှမည်သည့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေနှင့်အခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှအတူကွန်နက်ရှင်ကိုမချိုး, ငါတို့အမြစ်များမေ့လျော့တော်မရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
Diyana Alcheva အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook ပေါ်မှာ Diyana Alcheva
Instagram ကိုအပေါ် Diyana Alcheva
Twitter ပေါ်တွင် Diyana Alcheva
မီးရထားတှဲ, လူ, စိတ်ဖိစီးမှု, ယောဂ | | rating:5/ 30